Ihe ị ga-ahụ na Malta, ebe njedebe na Europe | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Malta, Ihe ị ga-ahụ
Malta Ọ bụ agwaetiti nke ọnọdụ ọnọdụ ya ewetaworo ihe karịrị otu isi ọwụwa kemgbe ogologo oge ya, ebe ọtụtụ mba na-ese ya. Ma ebe ọ bụ na 60 ọ bụ nweere onwe ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nde mmadụ bi na ya.
N'ụzọ doro anya, n'ihi akụkọ ihe mere eme ahụ merela eme ọdịbendị na ụkpụrụ ụlọ bara ụba ma ghọọ a njem nleta Kedu ihe a ga-atụle. Na-enwe mmasị maka ịga Malta ụbọchị ole na ole? Dee data ndị a.
2 Ihe ị ga-ahụ na Malta
Naanị agwaetiti atọ ka mmadụ bi, Malta, Gozo na Comino na ihe niile lekwasị anya n'isi obodo, Valletta nke dị na agwaetiti mbụ. N'oge ọgba aghara a, ndị Sicican, ndị Aragonese, Order of the Hospitaller Knights na ndị nke Order nke Malta, ndị Ottomans, Napoleon na o doro anya na ndị Britain bụ ndị mechara nọrọ n'àgwàetiti ahụ mgbe e merisịrị ndị France na narị afọ XIX.
Nwere onwe ya na Bekee na 1964 na mgbe ndị agha ahụ lara azụ bụ nke mbụ n’ime akụkọ ntolite ogologo oge nke agwaetiti ahụ na ndị agha mba ọzọ anọghị na ya. Kemgbe ahụ ụbọchị ahụ, Machị 31, bụ ụbọchị nnwere onwe.
con puku afọ asaa nke akụkọ ihe mere eme enwere ọtụtụ ihe ịhụ. Ma eleghị anya, otu isiokwu dị obere ka anyị kwuo banyere ihe niile ka anyị wee lekwasị anya naanị n'ihe ụfọdụ na-adọrọ mmasị ya. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịmalite njem nlegharị anya nke Valletta, ị gaghị echefu ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ndị a:
Ihe mgbe ochie Museum: ọ bụ ebe kachasị mma ịmịkọrọ oge ochie nke agwaetiti. N'ebe a ị gaghị echefu Rolọ Agha Lascaris, sel ndị ohu nke Order of the Knights nke Saint John gwuru n'ime okwute ahụ na Agha Worldwa nke Abụọ rụrụ ọrụ dị ka isi ụlọ ọrụ nke Allies. Site ebe a Eisenhower nyere iwu maka mwakpo nke Sicily na '43. Enwere map, ekwentị ochie, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọnụ ụzọ na-efu 10 euro.
Ihe ngosi nka agha: ọ na-arụ ọrụ na ebe mara mma, Fort nke San Elmo. Na Sọnde, a na-eji ejiji ndị uwe ojii yi uwe ochie.
National Museum nke Ọma Arts: Ọ bụ mara mma gallery na-arụ ọrụ na ihe mara mma Rococo n'obí na ọrụ niile oge site na narị afọ nke XNUMX.
Obí Nna-ukwu- O jere ozi dịka ntọala nke Order of the Knights of John John wee bido na ngwụcha narị afọ nke 1798. Iwu a ka Napoléon chụrụ na 10 ma ụlọ ahụ dara oke ọnụ n'ihi na Onye Isi Master fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye isi ebe a. Taa, ọ nwere ụlọ omebe iwu na ọfịs nke onye isi ala Malta. Nwere ike ịga ije na ngwa agha ochie, dịka ọmụmaatụ. Ọnụ ụzọ ụlọ eze ahụ na-efu euro 6 ma ọ bụrụ na emechiri ya na ihe agha ga-emeghe iji nweta ya naanị ụgwọ XNUMX euro.
Catacombs nke Saint Paul: Ha bụ Ndị Kraịst - Byzantine catacombs ndị dị na mpụga mgbidi ochie nke ochie Roman isi obodo Malta, nke bụ Mdina ugbu a. Ọ bụ labyrinth nke tunnels na ili gwuru n'ime okwute siri ike nke nwere okpokoro okirikiri, nke bụ ebe a na-eme ememe olili ozu. E nwere ọbụna ili ndị Finishia. Jụụ. Ọnụ ụzọ na-efu ihe dị ka euro 14.
Katidral nke San Juan: ọ bụ ụka bụ isi nke Order of the Knights of Malta. Ọ bụ ụlọ mara mma mara mma ma mara mma nke otu onye na-ese ụkpụrụ ụlọ nke mepụtara ụlọ elu nke Valletta mere. Ma n’ime ya mara mma, ya na mabul na ọlaedo ebe niile. A na-enweta ndu ndu na ọrụ abụọ mara mma nke Caravaggio. Ọnụ ụzọ na-efu euro 10 mana ọ bụrụ na ị gaa uka ọ bụ n'efu.
Ccalọ Rocca Piccola: Ọ bụ ụlọ mara mma nke ezinụlọ Maltese a ma ama. Ngwongwo na oru nka juputara na ulo a, ma enwekwara ebe a na-agha ogbunigwe site na agha nke abuo nke okwuru na okwute ya. Nleta bụ naanị njegharị naanị na Bekee ma gafere otu elekere. Tofọdụ njegharị na-enye ndị Marquis n'onwe ya. Gwọ ahụ bụ euro 9.
Beyond ndị a aga, M mgbe e juru site na akụkọ kacha ochie nke agwaetiti Malta, onye nke ụlọ nsọ mbu nke Mnajdra na Hagar, ọmụmaatụ. Taa, yana saịtị ndị ọzọ, a na-atụle ha Ebe ihe nketa ụwa.
A na-eme atụmatụ iwu ụlọ nsọ abụọ a n’agbata afọ 3600 na 2500 BC n'ihi ya, ha dị ọtụtụ karịa Stonehenge, dịka ọmụmaatụ, na otu puku okpukpu karịa ọkaibe. Ha nwere uko ụlọ, ọtụtụ ime ụlọ, ọnụ ụzọ gigantic, arịa ụlọ. A gaghị echefu ụlọ nsọ abụọ a. Na Mnajdra enwere ụlọ arụsị atọ n'akụkụ ibe ha na Hagar bụ ihe a na-adịghị ahụkebe. Luckily e nwere a esenowo center na awade audio ndu. Na mkpokọta ha na-emeghe site na elekere 9 nke ụtụtụ ruo elekere ise nke ụtụtụ na ọnụ ụzọ bụ 5 euro.
Templelọ nsọ ọzọ tupu mgbe ochie bụ tarxien, n'oge a na-ezo n'etiti ụlọ ndị ọhụrụ (ọ bụghị dị ka nke abụọ ndị gara aga bụ ndị nọ n'etiti ebe dị jụụ). Tarxien nwere ụlọ arụsị anọ mana otu, nke dị na ndịda, bụ nke a chọrọ mma nke ukwuu ma nwee ihe osise kachasị mma, taa gosipụtara na National Museum of Archaeology. Ọ bụ ụlọ nsọ ahụ dị nso na saịtị ọzọ dị egwu: Hal Saflieni Hypogeum.
Hypogeum bu ebe di egwu: a n'okpuruala mgbagwoju nke a na-ewere dị ka nke mbụ jere ozi dịka ebe nsọ na dịka necropolis mgbe e mesịrị. Achọpụtara ya na mberede na mmalite XNUMX ma nwee ọkwa atọ nwere okwute a nụchara anụcha. N'ezie, na oku Oracle Hall nkuzi mgbamejije di egwu. Naanị mmadụ 80 ka ị na-anabata kwa ụbọchị, yabụ ị kwesịrị ide akwụkwọ tupu ị gawa.
N'ikpeazụ, echetara m mgbe m bụ nwatakịrị, ajụjụ ndị Erich Von Dániken, onye Switzerland bu ụzọ n'okwu amụma mbara igwe oge ochie jụrụ banyere Malta na ihe nzuzo ya. Ihe bụ na Malta dum, e nwere ahịrị ndị ọzọ, narị otu narị, puku kwuru puku ahịrị ahịrị ndị a pịrị apị nke okwute siri ike. Ọbụna ụfọdụ na-abanye n’ime mmiri, n’okpuru mmiri.
Enwere ọtụtụ n'ime Misrah il-kbir, tupu ugwu Malta, ma di omimi di iche-iche. Ná nkezi, ha dị 15 centimeters mana ụfọdụ ruru 60 na obosara n'etiti ahịrị ndị yiri ya bụ mgbe ụfọdụ 140 centimeters. Ha dị oke oke, ma ọ dịbeghị onye nwere ike ịkọwa ha n'ụzọ doro anya.
Ọfọn, ọ bụrụ na ị gaa Malta, dị ka ị pụrụ ịhụ, ị ​​nwere ọtụtụ ihe ị ga-eme.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Malta » Ihe ị ga-ahụ na Malta, ebe njedebe na Europe